करियरको निर्णय कसरी लिने ? लक्ष्य कसरी बनाउने ? - Everest Talk
करियरको निर्णय कसरी लिने ? लक्ष्य कसरी बनाउने ?1 min read
२०७६, १७ फाल्गुन शनिबार १०:३५
in एभरेष्ट टक विशेष, टिप्स, मुख्य समाचार
तपाईँ आफ्नो जीवन र करियरको विषयमा आफैँ निर्णय लिन सक्नुहुन्छ । यो यस्तो समय हो, जब तपाईँले लिएको एउटा निर्णयले तपाईँको भविष्यमा असर गर्नसक्छ ।
आज हामी तपाइलाईँ विज्ञहरूले बताएका केही टिप्स दिन गइरहेका छौँ, जुन टिप्सबाट तपाईंले आफ्नो करियर बनाउनका लागि धेरै कुरा जान्न सक्नुहुनेछ ।
१. विशेषज्ञता हाँसिल गर्ने:
यदि तपाईंले आफ्नो भविष्यका लागि कुनै क्षेत्र रोजिसक्नुभएको छ भने त्यो राम्रो हो । छैन भने सबैभन्दा पहिला आफ्नो जीवनका लागि सही र उचित क्षेत्रको छनोट गर्नुहोस् । र, त्यही क्षेत्रसँग संलग्न कुनै पनि विषयमा विशेषज्ञता बनाउनुहोस् । आजको समय विशेषज्ञताको हो । कुनै विषयमा विशेषज्ञता हासिल गर्न सक्नुभयो भने यसले तपाईंलाई क्षमता विकासका लागि मद्दत गर्नेछ ।
कुनै क्षेत्रमा विशेषज्ञता प्राप्त गरेपछि एउटा लक्ष्य बनाउनुहोस् कि २४ वर्षको उमेरसम्म तपाईंको हातमा एउटा राम्रो करियर परिसकेको हुनेछ । तपाईं कुनै राम्रो व्यवसायी वा विषयगत विज्ञ पनि बन्न सक्नुहुन्छ ।
३. क्षमता परिक्षण:
तपाईं भविष्यमा के गर्न चाहानुहुन्छ ? यसको निर्णय तपाईं आफैंले आफ्नो क्षमताअनुसार लिनुपर्ने हुन्छ । तपाईंको साथी के गर्दै छन् सोचेर कुनै निर्णय नलिनुहोस् । निर्णय लिने समयमा यो पनि सोच्नूस् कि तपाईंले रोजेका क्षेत्रमा ५ देखि ७ वर्षपछि कस्तो स्कोप रहने छ ।
४. असल साथीसंगत:
एसईईदेखि १२ कक्षासम्म हरेक कोलोनीमा जो कोही पनि साथी हुनसक्छन् । तर, यसपछिको समयमा तपाईंले कलेज भर्ना भएपछि मित्रतामा पनि सेलेक्टिभ हुन आवश्यक हुन्छ । राम्रो साथीको पहिचान गर्न सिक्नुहोस् । ती मानिसहरू जो तपाईंको पढाई र करियरका लागि समस्या बनेका छन् ,उनीहरूलाई आफ्नो लिस्टबाट हटाउनुहोस् । यसको मतल ती साथीहरूलाई आफ्नो जीवनबाट बाहिर निकाल्ने भने हैन । उनीहरूसँग सम्बन्ध बनाई राख्नुस् । हरकोही कुनै समय काम लाग्ने छन् ।
५. प्रोफेसनल स्किल अभ्यास:
अब तपाईंले प्रोफेसनल बन्न पनि सिक्नुपर्ने हुन्छ । यदि रोजगार शुरु गर्नुअघि नै तपाईंले प्रोफेसनल बन्न सिक्नुभयो भने भविषयमा कुनै अफिसमा काम गर्न तपाईंलाई असहज हुने छैन । यसले तपार्इँलाई कुनै समस्या निम्त्याउन दिँदैन र भविष्यमा आफ्नै व्यवसाय गर्दा पनि यसले धेरै मद्दत पुर्याउनेछ ।
Tags: करियरक्षमता परिक्षणप्रोफेसनल स्किललक्ष्य